Gadaa: Mallattoo Qaroominaa fi Hambaa Seenaa – Oromedia
Home » Gadaa » Gadaa: Mallattoo Qaroominaa fi Hambaa Seenaa
Yaa’iin Hambaalee Killayyaa Dhaabbata Barnootaa, Saayinsii fi Aadaa Mootummoota Gamtoomanii (UNESCO) 11ffaan Finfinneetti geggeeffamaa jiru, Sirna Gadaan akka hambummaa seenaan galmaa’u murteesse. Kun Gadaan akka daran guddatuu, golee addunyaa keessattis akka beekamu ni godha.Kana malees, Gadaan jireenya dhala namaaf akka gahee isaa gumaachu ni taasisa. Gadaan har’a mallattoo qaroomina Oromoo fi hambaa seenaa aaddunyaa ti.
Sadaasa 30 bara 2016 yaa’iin guddaa tokko magaalaa Finfinnee keessatti taa’ee, waan seenaa dhala namaa keessatti bakak guddaa qabau murteesse; Gadaan hambaa addunyaa ta’ee galmaa’e.
Hambaa addunyaa kana galmeessisuuf abbootin Gadaa, hayyoonni, fi ummannii Oromoo hojiin hojjechaa turan dhumarra firii boonsaa galmeesse.
Sirna Gadaa kunuunsuun, qorannaa bal’aa irratti gaggeessuun, duudhaalee isaa kunuunsuunii fi dhalootaa dhalootatti akka darbu taasisuunis ga’ee abbootii Gadaa fi ummataa Oromoo ti.
Oromiyaan Gadaadhan, Sidaamaan Fiichee Caambalaalaa galmee “UNESCO”rratti akka hambaa addunyaa kiliyaarratti galmeeffamuun beekamaniiru.
Yaa’ii Hambaawwan Killayyaa 11ffaa Finfinneetti geggeeffamaa jiru kanaarratti Sirni Gadaa hambaa killayyaa addunyaa akka ta’uuf ‘UNESCO’ irratti galmeessisuuf qophiin barbaachisaan xumuramuun ala darbe ibsamee ture.
Previous: የተድላ ኃይሌ ደቀ መዛሙርት
Next: Salgan Ijoollee Noonnoo Kormee